Communicationslọ ọrụ Federal Communications Commission (FCC)bụ ụlọ ọrụ kwụụrụ onwe nke gọọmentị Federal nke United States. Emepụtara ya na 1934 site na omume nke Congress nke United States, ma ndị isi na-edu ya.
FCC na-ahazi nkwukọrịta ụlọ na nke ụwa site na ịchịkwa redio, telivishọn, nkwukọrịta, satellite, na eriri. Ọ na-ekpuchi ihe karịrị steeti 50, Columbia, na ókèala dị na United States iji hụ na nchekwa nke ngwaahịa nkwukọrịta redio na nke metụtara ndụ na ihe onwunwe. Achọrọ FCC nzere - asambodo FCC - maka ọtụtụ ngwa redio, ngwaahịa nkwukọrịta, na ngwaahịa dijitalụ iji banye ahịa US.
1. Nkwupụta nke Nkwekọ:Ndị ọzọ ga - ahụ ngwaahịa a (onye nrụpụta ma ọ bụ mbubata) ga-anwale ngwaahịa a n'ụlọ ọrụ nnwale ruru eru nke FCC họpụtara wee mee mkpesa nnwale. Ọ bụrụ na ngwaahịa a na-agbaso ụkpụrụ FCC, a ga-edepụta ngwaahịa ahụ n'ụzọ kwekọrọ na ya, akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ ga-ekwupụta na ngwaahịa ahụ ruru ụkpụrụ FCC, a ga-edebe akụkọ nyocha ahụ maka FCC ịrịọ.
2. Tinye maka ID.Nke mbụ, tinye maka FRN ka ị jupụta n'ụdị ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-achọ maka FCC ID maka oge mbụ, ị ga-etinye akwụkwọ maka GRANTEE CODE na-adịgide adịgide. Mgbe ị na-eche nnabata FCC iji kesaa Koodu Grantee na Onye na-arịọ arịrịọ, Onye anamachọ ihe ga-anwale akụrụngwa ngwa ngwa. FCC ga-akwadorịrị koodu Grantee site na oge FCC niile chọrọ ntinye ka akwadoro ma mezue Nnwale Ule. Ndị anamachọ ihe juputara FCC Forms 731 na 159 na ntanetị site na iji Usoro a, akụkọ nyocha, yana ihe ndị achọrọ. Mgbe ị nwetara akwụkwọ 159 na nnyefe ego, FCC ga-amalite nhazi ngwa maka asambodo. Oge FCC na-ewe iji hazie arịrịọ ID bụ ụbọchị 60. Ná ngwụsị nke usoro ahụ, FCC ga-ezitere onye na-achọ ọrụ onyinye mbụ na FCC ID. Mgbe onye nyocha ahụ nwetara akwụkwọ ahụ, ọ nwere ike ree ma ọ bụ bupu ngwaahịa ndị ahụ.
Nsonaazụ ndozi edezi
FCC na-enyekarị ntaramahụhụ siri ike na ngwaahịa ndị mebiri iwu. Oké ntaramahụhụ ahụ zuru ezu iji mee ka onye mejọrọ ahụ daa ego na enweghị ike ịgbake. Ọ bụ ya mere na mmadụ ole na ole ga-ama ụma mebie iwu. FCC na-ere ndị na-ere ngwaahịa na iwu na-akwadoghị n'ụzọ ndị a:
1. A ga-ewepụ ngwaahịa niile na-anaghị ahụ nkọwa ahụ;
2. Iji tụọ onye ọ bụla ma ọ bụ nzukọ ya ihe ruru otu narị puku dọla na narị abụọ rue narị abụọ;
3. Ahụhụ nke okpukpu abụọ ngụkọta ahịa ahịa nke ngwaahịa na-erughị eru;
4. Ntaramahụhụ a na-akwụ kwa ụbọchị maka imebi iwu ọ bụla bụ $ 10,000.